Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ‘म स्टेट फर्वाड छु’ : चकलेटी ब्वाई प्रदीप खड्का – Emountain TV
‘म स्टेट फर्वाड छु’ : चकलेटी ब्वाई प्रदीप खड्का
काठमाडौं, २७ फागुन । चकलेटी ब्वाई प्रदीप खड्का आइतबारबाट २८ औं वर्षमा प्रवेश गरेका छन् ।
सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्म ‘प्रेमगीत’ बाट हाइपमा आएका उनले आफ्नो जन्मदिन फ्यान र पत्रकारसँग सेलिब्रेट गरे ।
चैत २२ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘लभ स्टेशन’ टिमले आयोजना गरेको बर्थडे सलिब्रेसन कार्यक्रममा उनलाई पत्रकारले सोधे तपाईंको नराम्रो बानी के हो ? उनले जवाफ दिन समय लगाएनन् । उनले आफ्नो मजाक गर्ने बानी रहेको स्वीकारे । उनले भने कुनै पनि कुरा मजाक गर्ने बानी आजकाल नराम्रो साबित भइरहेको छ । सायद यही नै होला मेरो नराम्रो बानी । किनकि, म स्टेट फर्वाड छु ।
हालै फिल्म ‘लभ स्टेशन’ को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा अघिल्ला फिल्मबाट निर्देशक चाहिँ राम्रो चाहिने रहेछ भन्ने महशुस भएको बताएपछि उनको जमेरै आलोचना भएको थियो । यस अघि काम गरेका निर्देशकहरु नराम्रो रहेको आशयले मजाक उडाएको भन्दै प्रदीपमा स्टारडमको घमण्ड चढ्न थालेको टिकाटिप्पणी भएको थियो । उनले ‘लिलिबिली’ रिलिज यताका अभिनेत्री द्वय पूजा शर्मा र अश्लेषा ठकुरी प्रति पनि व्यंग्य गरेका थिए ।
प्रदीपले आफूलाई कुनै बानी सुधार गर्नु पर्ने लागेको खण्डमा त्यसलाई त्याग्न तयार रहेको पनि बोले । प्रदीपले शनिबार साँझ नै जसिता सहित फिल्मको टिमसँग बर्थडे सेलिब्रेसन गरेको खुलाए ।
सोमबार, २७ फागुन २०७५
हलिउडकी अभिनेत्री एवम् गायिका डोरिस डेको निधन
अनुष्का श्रेष्ठ बनिन् ‘मिस नेपाल वर्ल्ड–२०१९’को विजेता
टिकटक क्‍विन टुविन्स गर्ल
पूर्व राष्ट्रपति रामवरणकी छोरी अनिता विवाह बन्धनमा बाँधिदै
नायिका पुजा शर्माको आज २६ औँ जन्मदिन
एनसेल कार्यालयमा ताल लगाउन रेखा थापाको आग्रह
नीतिको स्पष्टिकरणः ‘म फिल्म गर्दैछैन’